Tuesday January 28, 2020 - 09:03:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xiisada colaadeed ayaa laga dareemayaa magaalooyin dhaca bartamaha dalka Soomaaliya oo ay ka jiraan maamullo shisheeye taabac u ah balse khilaaf siyaasadeed uu ka dhax jiro.
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan gudaha magaaladaasi, saaka aroortii hore ayay dowladda Federaalka ciidamo farabadan ku daadisay waddooyinka saacado kadib markii uu halkaas gaaray musharax dowladu wadato.
Maleeshiyaad daacad u ah hoggaamiyaasha Suufida ayaa iyana gudaha Dhuusamareeb ka sameeyay dhaq dhaqaaq ay isku muujinayaan arrinkaas oo dhaliyay cabsi dagaal.
Saraakiisha ugu sarraysa kooxaha Suufida oo warbaahinta lahadlay ayaa dhaleecayn ujeediyay dowladda Farmaajo iyo Kheyre oo ay ku eedeeyeen in ay waddo maroorsi dhanka maamulka ah.
Dhinaca kale maleeshiyaad daacad u ah Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dhaq dhaqaaq ka sameeyay deegaanka Gelinsoor oo kala qeybiya gobollada Mudug iyo Galguduud, warar kale oo laga helay Caabud Waaq waxay sheegayaan in halkaas ay gaareen mas'uuliyiin katirsan DF-ka.
Xiisado siyaasadeed oo iskasoo horjeeda ayaa laga dareemayaa inta badan degmooyinka ku hareeraysan wadada laamiga ah, musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa dowladda Farmaajo ku eedeeyay in ay cadaadis siyaasadeed ku hayso.